नेकपा र सूर्य चिह्न कसको होला, प्रचण्ड-नेपाल समुह कि ओली समुह ? « Postpati – News For All
नेकपा र सूर्य चिह्न कसको होला, प्रचण्ड-नेपाल समुह कि ओली समुह ?
पुस ९, काठमाडौं । पार्टीका दुई खेमा अलग्गिएसँगै जनमानसमा एउटा जिज्ञासा व्याप्त छ– नेकपा र सूर्य चिह्न कसको होला ? विज्ञहरू यसका तीनवटै सम्भावनाबारे मत राख्छन्–
२. दाहाल-नेपाल समूहको
३. मनोनीतबाटै चलिरहेको दलमा ओलीतर्फ थप सदस्य मनोनयन गरिएका (४४६ बाट ११९९ पुर्‍याइएका) छन्, जसको बहुमत उक्त खेमामा पुग्छ।
कानुनअनुसार दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउनुपर्छ। संसद् नभएको अवस्था केन्द्रीय समितिलाई मात्र आधार बनाइन्छ। नेकपाका दुवै पक्ष फुट्न अनिच्छुक छन्। ‘दुवैले आधिकारिकता चाहेमा केन्द्रीय समितिको ६० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने हुन सक्छ। कसैले पुर्‍याएन भने पार्टी निलम्बनमा जाने अवस्था आउँछ’, आयोगकै एक पूर्वप्रमुखले भने ‘अन्त्यमा नेकपा निलम्बित भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ।’ यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् ।